Covid-19 yativhura pfungwa: Madzishe | Kwayedza
Covid-19 yativhura pfungwa: Madzishe
11 Nov, 2021 - 08:11 2021-11-11T08:44:22+00:00 2021-11-11T08:44:22+00:00 0 Views
MADZISHE ekudunhu reMashonaland West ari kubatana nechinangwa chekurwisa matambudziko akaunzwa kuruzhinji nechirwere cheCovid-19 kuburikidza nekutanga mabhindauko emaoko ayo ari kuraramisa mhuri dzakawanda.
Mukuru wemadzimambo kuMashonaland West, Senator Peter Pasipamire (41) – avo vanova Mambo Ngezi vekuMhondoro – vanoti kuuya kweCovid-19 kwakavavhura pfungwa kuti vasagarire maoko.
Vanoti mudunhu rose reMashonaland West mune madzishe makumi matatu nekudaro vakaita chisungo nemasadunhu avo chekutanga mabhindauko anobatsira ruzhinji kumavambo egore ra2020 pakatanga chirwere cheCovid-19 muno.
“Tatevera nhoroondo dzaibva kunyika kwakatangira chirwere ichi, takaita musangano wemadzishe mudunhu redu ndokupanana mazano emabhindauko anokwanisa kuraramisa mhuri dzedu dzinosanganisira madzimai, vechidiki, shirikadzi, nherera nevakwegura tikabuda nechisungo chimwe chete,” vanodaro.
Mambo Ngezi vanoti vakatanga kuenda kumakambani akazvimirira ezvicherwa nemamwe vachitsvaga nzira dzekuti vangabatsirwe sei.
“KuMhondoro tine Ngezi Platinum yagara ichitibatsira mune zvakawanda kubvira denda reCovid-19 risati ratanga. Kambani iyi yakapinzawo vechidiki mabasa nekutipa mari nezvimwe zvekutanga zvirongwa zvekuzviriritira kunyanya zvinobatsira shirikadzi, vechidiki, nherera nevamwe vanoshaya.
“Takatanga mabhindauko ayo ari kufamba zvakanaka zvikadzinga nzara yaiva yaunzwa nechirwere cheCovid-19,” vanodaro Mambo Ngezi.
Vanoti mabhindauko avari kuita anosanganisira kusona mbatya, kuruka waya nemajuzi, kupfuya huku netsuro, mabhizimisi ematakishopu nekurima.
“Vamwe vakapinda munyaya dzekuchera zvicherwa nezvimwewo. KuKariba, vechidiki takavatsvagira mari yekuvamba mishandirapamwe yekubata hove dzematemba nedzimwe vachiomesa nekuzodzitengesa,” vanodaro.
Mambo Ngezi vanoenderera mberi vachiti, “Kuvako kweCovid-19 kwakaita kuti pfungwa dzedu dzivhurike ndokuvamba mamwe mabasa ekuzviriritira kuno kuMashonaland West. Pamakore maviri aya, vanhu vabudirira zvikuru uye dai pasina denda iri, mabasa aya angadai asina kuitwa.
“Saka neimwe nzira tinoti chirwere ichi chativhura pfungwa, vamwe vave kugadzira mibhedha nemacheya nezvimwe zvakawanda zvinoenda kunze kwenyika.” vanodaro Mambo Ngezi.
‘Maimwana ndarota muine chikomba&#...03 Dec, 2021
Zvitunha 5 mugomo: Zvimwe zviri kubuda
Zviri pamusoro peCovid itsva